Airtel –Mass’In – Ivenco – Infinix: miaraka amin’ny Mage 4 hanao ny “Rock Legends” | NewsMada
Airtel –Mass’In – Ivenco – Infinix: miaraka amin’ny Mage 4 hanao ny “Rock Legends”
Par Taratra sur 08/12/2018
Ny 21 desambra ho avy izao ao amin’ny Dôme Ankorondrano, hanao ny “Rock Legends” ny tarika Mage 4, handikana ny hiran’ireo fanta-daza maneran-tany, toy ny Mr Big, Scorpions, Metallica, Europe, Queen, The police, Bon Jovi sy ny maro hafa.
Hanohana ny Mage 4 amin’io fampisehoana io ny Airtel, toy izay efa natomboka tamin’ity taona ity tamin’ny mpanakanto hafa ary mbola hitohy amin’ny taona ho avy. Finiavan’ny Airtel ny hampitambatra ireo mpankafy rock io fotoana io, hiarahany amin’ny Mass’In sy ny Infinix mpanohana hafa sy ny Ivenco mpikarakara ny lanonana.
Faharoa izao ny fampisehoana “Rock Legends”, raha herintaona lasa katroka ny voalohany, nahitana fahombiazana feno ho an’ireo mpankafy azy sy ny tarika Mage 4. Izany no nahatapa-kevitra azy ireo miaraka amin’ny Ivenco ny hanaovana izao andiany faharoa izao, ampian’ny Airtel sy ireo mpiara-miombon’antoka hafa, Mass’In sy Infinix. Haharitra ora efatra ny fampisehoana, mizara telo, handikana hira 42 eo ho eo. “Hafa tokoa io fotoana io, satria manomboka any amin’ny fandraisana mpijery efa hisy hampiavaka azy”, hoy i Beback ao amin’ny Mage 4.
Ho an’ity tarika ity, nampisongadina azy ny taona 2018, nahazoany loka RDJ Music Awards ; izay fampisehoana rehetra nataony “guichets fermés”, teto Antananarivo, Toamasina, Antsirabe, Ambatolampy… Ity taona ity ihany koa ny fankalazany ny faha-25 taonany, namoahany raki-kira sy raki-tsary nomeny anarana”XXV”.
Ny Ivenco kosa, tanora mpikarakara lanonana sy fampisehoana. Hita izany eo amin’ny fampihaingoana, ny hazavana, sy ny zava-maneno tamin’ireo fampisehoana lehibe nokarakarainy tao amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina, Antsahamanitra …sy tamin’ireo toerana voafetra ihany ( Kudeta, Plazza…).